Muxuu Luka Modric Ku Jawaabay Markii Uu Eden Hazard Ka Dalbaday No.10ka Real Madrid? Hazard Laftiisa Ayaa Soo Bandhigay - Gool24.Net
Muxuu Luka Modric Ku Jawaabay Markii Uu Eden Hazard Ka Dalbaday No.10ka Real Madrid? Hazard Laftiisa Ayaa Soo Bandhigay
Eden Hazard ayaa ugu danbayn si rasmi ah u noqday ciyaartoy Real Madrid ah kadib markii lagu soo bandhigay Santiago Bernabeu oo ay ka soo xaadireen dad ka badan 50,000 kun oo taageerayaasha Madrid ah.
Eden Hazard waxa uu qalinka ku duugay heshiis shan sanadood ah oo uu Madrid ku joogi doono kadib markii laga soo bixiyay lacag 100 milyan yuro ah oo waliba gaadhi doonta ilaa 130 milyan haddii waxyaabo khaas ah uu Madrid ku gaadho.
Eden Hazard ayaa caan ku ahaa xidhashada maaliyada No.10 ee kooxdiisii hore ee Chelsea iyo waliba xulkiisa Belgium laakiin Real Madrid kama heli doono xidhashada lambarkan waxaana ku xaragooda Luka Modric.
Laakiin Eden Hazard ayaa qaab kaftan ah u soo bandhigay markii uu Luka Modric ka dalbaday in uu dayn ahaan ama amaah ku siiyo lambarka 10-aad ee Real Madrid wuxuuna sheegay in uu fariintan sii mariyay xidigii ay isku kooxda ahaayeen ee Kovicic oo ay Modric isku xulka Croatia yihiin.
Eden Hazard ayaa sheegay in Luka Modric uu ka diiday in uu xataa amaah ku siiyo No.10 kooxda Madrid waxaana dhex maray kaftan intii aanu xataa soo gaadhin Bernabeu ee aan saxaafada loo soo bandhigin.
Eden Hazard oo ka hadlayay xidhiidhkii uu Luka Modric la sameeyay ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waxaan la xidhiidhay Modric aniga oo sii dhex maray Kovacic, waxaanan Luka ka dalbaday lambarka 10 aad. Muxuu isagu ka yidhi?”.
Eden Hazard oo soo gudbinaya jawaabtii uu Luka Modric ka helay ayaa yidhi: “Waxa uu isagu yidhi Maya. Hadda waxaa waajib igu ah in aan lamar kale raadsado(qosol)”.
Laakiin Eden Hazard ayaa sheegay in markii uu Luka Modric ka dalbanayay Lambarka 10 aad in uu kaftamayay ayaa yidhi: “Markii aan isaga ka dalbaday in uu i amaahiyo/daymiyo No.10 waan kaftamayay”.
Intii la soo bandhigayay Eden Hazard waxa uu sare u hayay maaliyada Real Madrid oo uu ku qoran yahay “Hazard” oo aan wax lambar ah lahayn taas oo ka dhigan in Hazard uu lambar cusub ka raadsan doono kooxdiisa Madrid iyada oo Madrid uu sii haysan doono Lambarka 10 aad.